Wuxuu ku guuleystaa imtixaanka madaxa ee madaxa loo yaqaan 'Solo Pro Head': Tijaabinta tijaabada ah - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM »Wuxuu garaacayaa Solo Pro Head Heetet: Maxkamad la Bedelay
Wuxuu ku garaacaa tijaabada madaxa madaxa ee 'Pro Pro': Tijaabinta tijaabada ah
Ka dib markii ay soo baxday Powerbeats Pro ee aadka u wanaagsan, astaanta Beats waxay bixisaa aalada dhagaha ee wireless Pro Pro oo leh hoos u dhac aad uqurux badan oo firfircoon.
Sannadka 2019 wuxuu u eg yahay cusboonaysiinta astaanta Beats, oo lagu sharfayo sida props fashion (mahadsanid ciyaartooydii) oo ku jees jeesay wax-ka-qabashada maqalkeeda. Sababta oo ah ka dib kuwa fiican Powerbeats ProTaleefannadeeda tooska ah ee runtiisu tahay mid aan toos ahayn oo ay dhiirigelisay shirkadda 'AirPods', oo ay leedahay shirkadda Apple, ayaa soo saaraysa madax-weynaha Solo Pro. Mar labaad, waa badeecad 100% wireless ah, oo ay ku jirto gunnada dheeriga ah ee yareynta dhawaaqa firfircoon. Faahfaahinta dambe waxa ay xaqiijineysaa habka cusub ee Beats, kaasoo umuuqda inuu ugu dambeyntii ka faa'iideysan doono ku biiridiisa shirkadda Cupertino.
Makarafoonka wuxuu garaacaa Solo Pro fur // Source: Maxime Claudel oo loogu talagalay Numerama
In ka yar euroda '300 euro,' Solo Pro wuxuu ku talajiraa inuu ku dul socdo sariiraha xalka kale ee lagu aqoonsan yahay suuqa - kuwa soojeediyay Sony iyo Bose maskaxda ku haya. Tani maahan wax aan macquul ahayn lafteeda, marka loo eego sida ugu fiican tartanka. Laakiin isbuucayaga oo qaatay maqalka Solo Pro ee dhegaha ayaa u muuqda inuu xaqiijinayo hal shay: Beats wuxuu noqonayaa jilaa halis ah, oo xajinaya awooddiisa (naqshad qurxoon) iyo qabashada daciifnimadiisa weyn (inuu ku dhammeeyo buundada caajiska) .
Si quruxsan oo sifiican ayaa u dhamaaday
Waxyaabo badan ayaan u canaanan karnaa Beats, laakiin dhab ahaan maaha naqshadeynta alaabteeda. Xaqiiqdii, inta badan way ka jilicsan yihiin kuwa celcelis ahaan, laakiin waxay iska iloobi doontaa dhinaca iswada ee koofiyadda - had iyo jeer aad bay u muuqataa markaad xidhan tahay. Kuwa raba qaabab yar madaxooda, Solo Pro wuxuu ku tiirsan yahay DNA-da astaanta. Waxaan tusaale ahaan u helnaa saxeexa lagu matalay astaan ​​'b' kaas oo boos kasta ka qaadanaya meel dhegta dhegta adag. Haddii aad rabto miyir beel badan, u gudub dhamaadka '100% madow.
Solo Pro waxay ku dhisantahay DNA-da astaanta
Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa tayada dhammaadka tusaalaha Solo Pro, oo leh caag u muuqda mid dhamaaday, oo lagu daray maqaar kaas oo ku daraya taabasho xarrago leh shayga. Qaanuunka, oo aan laheyn dabacsanaan (gaar ahaan inta lagu gudajiray adeegsiga hore), waa mid la isku hagaajin karo dhererkiisa iyadoo ay ugu wacan tahay nidaamka soojiidashada leh ee isku dhafan ee iska caabbinta soo dhoweynta. Gaadiidka, koofiyadda lafteeda ayaa isku laabata oo ku dhejisan dabool jilicsan oo jilicsan (waa la siiyaa, laakiin waa la la'yahay meel koronto loogu talagalay fiilooyinka).
Koofiyad ku garaacista Solo Pro xididka // Isha: Maxime Claudel ee Numerama
Madax-weynehu wuxuu garaacayaa Solo Pro qaylo-dhaan // Source: Maxime Claudel ee Numerama
Maaddaama Beats ay ka tirsan tahay Apple, wax soo saarkooda waxaa loo maleynayaa inay si buuxda ugu dhexjiraan aagga deegaanka iOS. Ma haysaa iPhone? Bingo, kaliya waa inaad furaysaa Solo Pro oo u dhow taleefanka casriga si aad isaga kaashatid (maxaa yeelay haa, ma jiro badhan dab ka dhashay, oo lagu beddelay nidaamkan laalaabka ah). Nidaam soconaya dhowr ilbiriqsi oo ku daraya dood hubaal ah oo loogu talagalay dadka isticmaala aaladaha moobiilka ee shirkadda Cupertino. Iyo, dabcan, Solo Pro waxay leedahay dhammaan faa'iidooyinka AirPods, iyagoo ka bilaabaya amarka 'Dis Siri'. Laakiin aficionados Android ayaa dib loo hubiyaa: sheyga sidoo kale si fiican ayuu ugu shaqeeyaa guriga.
Muuqaale ahaan, koofiyadda waxay umuuqataa inay joojiso is dhex galka jirka. Xaqiiqdii, atrium-ka saxda ahi wuxuu bixiyaa suurtagalnimada in lagu dhaqaaqo amarrada qaarkood. Astaanta 'b' waxay qarinaysaa badhanka isugeynta si loo joojiyo, loo aqbalo wicitaan ama u bood heesta xigta. Muuqaal ahaan, riix kor ama hoos. Dhinaca bidix bidix, waxaa ku jira batoon qarsoon oo awood u siinaya / kadhigi karaya hoos udhaca dhawaaqa firfircoon ama u beddelo habka Furfurnaanta (labalaabo riix si aad u dardar galisid dhammaan si loo kordhiyo madax-bannaanida) La soco in ay suurta gal tahay in la maro Xarunta Kontoroolka ee macruufka si loo hagaajiyo buuqa yareynta (oo leh, Transparency ama la'aan).
Dhibic xumo, Beats waxay gabi ahaanba ilaawaysay inay dhex gasho hakinta tooska ah ee gabal markii qofku meesha ka saaro koofiyadda, oo waajib ku ah midkood inuu xidho (bakhtiiyo), ama riix batoonka 'b'. Marka mid loo adeegsado astaantan wax ku oolka ah, mid ayaa aad uga sii yaabisay maqnaanshaheeda.
Iskuday intaadan iibsan
Adkeynta Solo Pro waa labadaba waa tayo iyo cilad, gaar ahaan inta lagu jiro saacadaha ugu horreeya ee isticmaalka (waqtiga koofiyadu xoogaa jilciso). Runtii, waxay u egtahay inuu xoogaa cadaadiyo, taas oo sababi karta dareenka raaxo darada fadhiga dheer. Sida gunno ah, qaab-dhismeedka On-Dhegaha halkii-ka dhegtain dhegaha la xidho, ma caawinayso (gaar ahaan haddii aad xidhato muraayadaha indhaha), oo caagga ay ku duubnaayeen daloolka hoosta ayaa sii adkaanaya. Marka la soo koobo, aragtida koowaad ma fiicna.
Kadib, markaan sii wadno, si wanaagsan ayaan uga shaqeynaa Solo Pro oo ah, iyada oo aan helitaanka koofiyadaha ugu raaxada badan (aan ogayn ciriiri yar), oo maareynaysa in la iloobo. Tusaale ahaan, wax dareem ah kuma dareemin inta lagu gudajiray fadhiyadayada isboorti, gaar ahaan maadaama dayactirku uu tusaale u yahay. Wali waxay kugula talineysaa inaad isku daydo ka hor intaadan iibsan, shaki ayaa loo oggol yahay foomkan si gaar ah oo aan daruuri u aheyn dhamaan madaxyada.
Beats Solo Pro Helmet Roll // Isha: Maxime Claudel ee Numerama
Aad u dheellitiran
Beats wuxuu iftiiminayaa hoos udhaca dhawaaqa firfircoon ee barnaamijkiisa 'Solo Pro', oo ay ku shaqeeyaan tikniyoolajiyadda Pure ANC. Sida AirPods Pro, awooddu ma hagaajin karto awoodda: ha ahaato mid ON ama OFF. Dhanka kale, waxay si joogto ah ula qabsaneysaa jawiga si ay uga go'doomaan dhawaaqyada ugu wanaagsan ee noole. Xaqiiqdii, ma gaarto waxtarka ugu dambeeya Bose headphones 700laakiin waxay maamushaa si fudud ay u yareyn karto dhawaaqyada ka dhigaya nolol maalmeedkeenna (tusaale: kuwa soo saaray keyboard kombiyuutarka). Gudaha hoolka isboortiga, naxwaha dumbbell-ka gabi ahaanba gabi ahaanba lama tirtiro, laakiin Solo Pro wuxuu yareeyaa dhegaha badan (tijaabo iyo la'aan). Iyo, dabcan, sixirku wuu sii shaqeeyaa xitaa markaad dhegeyso gabal muusiko ah.
Qaabka daah furnaanta ayaa si aad ah u shaqeeya. Xitaa waa mid cajiib ah awoodeeda ay ku weyneyso codadka kuwa doonaya inay nala hadlaan markii ay koofiyadda xiran yihiin. Ilaa heer aan la yaabnay inaan maqalno si ka fiican iyadoo aan gebi ahaanba baabi'inayno yareynta dhawaaqa firfircoon.
Dhinaca codka, Beats wuxuu xaqiijinayaa, isaga iyo Solo Pro, in uu ku dhammaaday adkaynta baasaska. Waxay ahayd waqtigii oo markaa waxaan ku raaxeysanayaa dheel dheell dheellitiran, sax ah iyo dhageysi wacan. Taleefoonnada dhagaha ayaa aad ugu raaxaysta nooc kasta, oo leh codad banaanaanaya oo aan ka badin inta kale ee loo yaqaan (rap, r'n'b iyo guriga ayaa weli ku sii jira Beats dhul jecel). Intaa waxaa sii dheer, haddii injineerku joojiyo sharadka baastada, kuma ay dhicin dhiciladan foosha xun ee dhammaantood ama waxba. Runtii waa wax la yaab leh markii loo baahdo, faa'iidooyinka fog iyo kuwa aan dhadhanka lahayn. Kaliya Solo Pro waxaa laga yaabaa inaysan haysan kuleylka qaarkood waqti ilaa waqti markii ay inyar ka qalalan tahay mugga sare. Si aan uga gudubno waxyaabaha noocan ah, kama hor imaan laheyn is barbardhig.
Wuxuu ku garaacaa madaxa madaxa koofiyadda 'Solo Pro' Source: Maxime Claudel oo loogu talagalay Numerama
Beats wuxuu ku dhawaaqayaa saacad batari ah oo ah 22 oo leh codka dhimista qaylada (40 saacadood la'aan). Waxaan si fudud ula qabsan karnaa tirooyinkaan, annagoo og in Solo Pro ay soo kaban karto saacadaha dhageysiga ee 3 ee daqiiqadaha 10 ee khidmadda ah (iyada oo loo marayo dekeddeeda ... Hillaac). Kaarka cas ee fiilada la siiyey: Hillaac ilaa USB-A ... Qodob kale oo lagu nuuxnuuxsanayo: aasaaska, madaxa waa 100% wireless, micnaheedu ma waxaad heli doontid fursad aad ku xirto si aad ugu raaxeyso wanaagiisa haddii ay dhacdo batari madhan. Marka laga tago mooyee adaweeydi si gooni gooni ah ayaa loogu iibiyay ... ilaa 39 euro.
Wuxuu ku garaacay Solo Pro-yada
Faahfaahin muujin: 4 / 5
Ka dib sannado badan oo lagu jeesjeesayey dhawaaqooda aad u badan ee ku saleysan bass, Beats ayaa ugu dambeyntii isweydiisay lafteeda. Ka dib markay gaaraan taleefankiisii ​​ugu horreeyay ee bilaa-doorka ah (Powerbeats Pro), props-yada waxay raacaan Solo Pro oo xadka u sareeya heer sare.
Wireless, si fiican ayaa loo dhammeystiray oo leh qancin buuq oo firfircoon oo yaraynaysa, Solo Pro ayaa ah mid aad uxiisaad badan oo madax-weyne ah. Kaliya faahfaahin yar, oo laxiriirta raaxada ama ergonomics, ayaa ka hortagaya sheegashada dhibcaha ugu badan. Laakiin markii aan xasuusano halka ay Beats ka timid, waxaan dhahnaa in dariiqa hadda la wada jiiday.
Yaraynta firfircoonaanta oo yaraata
Raaxo su’aal ah
Ma jirto USB-C
Ikhtiyaarka wareegga ah ee 39 euro
Maxime Claudel ee Numerama
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.numerama.com/tech/567867-test-du-casque-beats-solo-pro-essai-transforme.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=567867
Kaarka Apple ayaa lagu eedeeyay inuu yahay jinsi, baaritaan ayaa la furay
Dhinaca, maxaa TikTok loogu magacaabaa TikTok?